Dowladda Jabuuti ayaa sheegtay in wafdi xaqiiqo raadin ah u dirtay xadka Somalia iyo kenya… – Hagaag.com
27 Janaayo 2021 in Sports // Manchester City ayaa si ku meel gaar ah u qabatay hogaanka Premier League kadib markii..
27 Janaayo 2021 in Sports // Inter ayaa u soo baxday semi-finalka Coppa Italia kadib markii ay ka badisay AC Milan…
27 Janaayo 2021 in English // US says Eritrean forces should leave Tigray immediately…
27 Janaayo 2021 in English // Israeli military chief warns of new plans to strike Iran…
27 Janaayo 2021 in National // Baarlamaanka Turkiga ayaa u kordhiyey muddo hal sano ah hawlgalka ciidamada Turkiga…
Dowladda Jabuuti ayaa sheegtay in wafdi xaqiiqo raadin ah u dirtay xadka Somalia iyo kenya…
Posted on 26 Diseembar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Dowladda Jabuuti ayaa loo xil saaray in ay yareyso sii socoshada khilaafka Diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya labada Dowladood Soomaaliya iyo Kenya kadib kulankii dhawaan ugu soo dhamaaday wadamada ku jira Urur gobolleedka IGAD dalka Jabuuti.
Jabuuti ayaa wafdi xaqiiqo raadin ah u dirtay xadka labada dowladood si ay u soo eegto xaalada halkaa ka taaggan iyadoo xiisada xudduuda ay qeyb ka tahay arrimaha ugu waaweyn oo ay labada dowladood isku hayaan.
Maxamuud Cali Yuusuf oo ah Wasiirka Wasaarradda Arrimaha Dibadda dalka Jabuuti ayaa sheegay in dowladiisu wafdi xaqiiqo raadin ah u dirtay xadka labada dal ee muranku ka jiro.
Dowladda Soomaaliya ayaa shirkii ugu danbeeyay ee ku soo dhamaaday dalka Jabuuti waxaa cadaadis lagu saaray in ay soo dhameyso khilaafka siyaasadeed ee kala dhaxeeya dalka Kenya, lagana heshiiyo dhamaanba qoddobada leysku hayo.
Kooxdan ay Jabuuti u dirtay xadka labada dal Kenya iyo Soomaaliya ayaa xogta ay soo helaan kula noqon doona dalka Jabuuti si halkaa looga sii waddo dadaallada dhax-dhaxaadinta ah.
About Admin (12914 Articles)
US says Eritrean forces should leave Tigray immediately…
Israeli military chief warns of new plans to strike Iran…
Manchester City ayaa si ku meel gaar ah u qabatay hogaanka Premier League kadib markii..
Inter ayaa u soo baxday semi-finalka Coppa Italia kadib markii ay ka badisay AC Milan…